Nzukọ na eze nke abalị Florentine
mgbe anyị na-ekwu maka egwu egwu ma bie ifuru igwu egwu na ụtụtụ florence nke mgbede ụwa, onye nwere ike ghara ikwu ma otu nke aha akụkọ ihe mere eme nke gburugburu ebe a.
Fabrizio Rioli bụ onye na - eme ihe karịa ndị ọzọ jisiri ike nye oge kwesịrị ncheta na discos na klọb buru ibu ebe egwu ahụ megharịrị ma jikọta ya 120 bpm elu.
Ma onye bụ Rioli D.J. ?
Kedu ihe bụ akụkọ ntolite ya na ebe o si abịa?
ịza ajụjụ ndị a enweghị ụzọ kacha mma iji jụọ ya ozugbo ma mee nke a, anyị gara ịchọ ya na-ezu ohi ozi echekwara na Egwu Rioli Planet, nzukọ na-achịkwa mgbede na ihe omume nke onye na-ese ihe site na ịhazi arịrịọ sitere na ọkara ụwa.
na Rioli Planet Music anyị zutere Tarker Homan, onye ọchụnta ego ahụ na-akpọ onwe ya aka ekpe nke Rioli D.J., onye gbasara Warner, la Kwere, Sony Records na ọtụtụ ndị ọzọ.
Rioli D.J. n'agbanyeghị nnukwu ngwa a dị n'azụ ya, ọ na-achịkwa mgbe niile ka ọ bụrụ onye na-ese ihe ma dịkwa mma, enyi niile ma na-adị njikere mgbe niile itinye aka na-enye ya mgbede ya dị ịtụnanya nye onye ọ bụla rịọrọ ha na onye nwere ihe mbụ dị mkpa maka ọmịiko na iguzosi ike n'ihe. Tarker na-ebu ọrụ zuru oke maka nhọrọ ndị kachasị oke “ọjọọ”, dị ka ịjụ ihe omume ma ọ bụ ebe mgbakọ na-adabaghị na ọnọdụ na ozi nke Rioli D.J.
Otu mgbede anyị jisiri ike soro ya na DJOON, ụlọ oriri na ọ nightụ Parisụ ndị Paris ama ama. Djoon pụtara n'ụzọ nkịtị “anima” na ebe a nwere otutu nkpuru obi. Odighi nso di Seine, na 13 nke arrondissement, na Djoon bụ otu n'ime ndị ikpeazụ a mụrụ nke usoro klọb bilitere na mpaghara a, nke na-esiwanye ama maka ebe nzukọ ya na-aga n'ihu. Ọtụtụ ndị hụrụ egwu egwu Afro-house hụrụ n'anya, clublọ elu a dị elu nke oge a nke sitere na ụdị New York emeela ngwa ngwa nwee ekele n'ihi abalị ya ndị a na-agaghị echefu echefu nke mkpụrụ obi egwu, funk, ụlọ miri emi, ụgbọala na diski. O nweela ma na-akwado kpakpando mba ụwa dịka Chez Damier, Louie Vega, Lil ‘Louis, Kerri Chandler e Black Kọfị. Ebe a sara mbara nke ukwuu ma nwee ọmarịcha iko na nchara nchara nchara.
Ya mere, anyị nwere ike ịchọta Rioli D.J. onye mechara ppingụọ ihe ọ beforeụ hisụ ya tupu mmalite nke mgbede agba egwu, nọ ọdụ na bench dị n'etiti oche. Ohere nnwale!!
Anyị: “Cheregodi, nke a bụ akụkọ ifo Rioli D.J. ?”
Rioli: “n'ezie, Ọ bụ m. Mana kedu ihe iji agwa m okwu na French ma ọ bụrụ na ị bụ onye ara nke andriusmusic.com?”
Laughchị ọchị na-ebelata ogologo oge, Fabrizio chọpụtara anyị ozugbo ma anyị nwere ike ịga n'ihu na-ekwu okwu n'asụsụ Italian.
Anyị: “Anyị nwere ike ịrịọ gị ka ị gwa anyị nkenke akụkọ gị? Eg, ọ bụ eziokwu na ị bi ebe a na Paris ọtụtụ afọ?”
Rioli: “mba, mba… io preferisco Scandicci, ndị Viottolone na gburugburu ya”.
Anyị: “egwu gị nwere njikọ ụfọdụ na oge akụkọ ihe mere eme?”
Rioli: “M na-ekwukarị gbasara Neocytationism nke Austrian”.
Anyị: “Hasnye metụtaworo mmasị gị kachasị njọ? Kedu otu o siri mee na ị ghọrọ Rioli D.J. ?”
Rioli: “N'ezie nwanne mama m, ee nwanne mama m nwere mmasị itinye ihe ndekọ nke Villa na Modugno, Ebe a, Echere m na ọ masịrị m nke ukwuu.”
Anyị: “Kedu ihe bụ eziokwu gbasara eziokwu ahụ bụ na Calvin Harris kpọtụrụ gị maka imekọ ihe ọnụ?”
Rioli: “Amaghị m, Echeghị m na m ma ya… è un emergente?”
Anyị: “E’ Ọ bụ eziokwu na ọdịnihu ịtọhapụ egwu ị mepụtara na-ezube na Andrew Firenze?”
Rioli: “Enwere ohere a mana mmadụ mere ka m ghọta na ọ ga-aka mma izere, enwere nnukwu ọdịmma akụ na ụba na ndọrọ ndọrọ ọchịchị”.
Anyị: “na ọrụ gị ị nabatara ịrụ ọrụ na klọb ndị a ma ama na ama ama, olee otu ị ga-esi kọwaa nhọrọ a dị ịtụnanya?”
Rioli: “Ahụtụbeghị m ya tupu ma ekele maka ime ka m mara, enwere ike nihi na ndi pere mpe bu ndi no na ulo m ..”
Anyị: “olee ndụmọdụ ị chere i nwere ike inye ndị na-eto eto chọrọ ibido ọrụ nka a?”
Rioli: “Nye ya ma gbalịa ime ihe ọzọ, dị ka ihe ubi nke tomato, ikekwe San Marzano nke m chere kacha mma.”
N'oge a, ndị nche abụọ gigantic nwere iko gbara ọchịchịrị na ntị ntị na-egbochi anyị ka anyị rịọ ka anyị pụọ ma hapụ Rioli D.J. nwere ike kpamkpam nweta console.
E’ ọ bụ nnukwu ahụmahụ, anyị enweghị olileanya ịbịaru ya nso kama, mere.
Ugbu a, anyị onwe anyị edebekwara igwe okwu na akwụkwọ ndetu anyị, ihe ngosi a na-amalite.
Soro Rioli DJ na Facebook